SSL Myanmar Archives - Zomi Adventist Innkuan
Printable Myanmar Sabbath School Lesson for 3rd Quarter of 2022 “In the Crucible with Christ” is avaiable to download as PDF and to print out. Get it here.
Second Quarter Sabbath School Lesson Myanmar ZomiHualngo Available for Download. Myanmar Zomi Cover Zomi MYUM Zomi MUC Hualngo
MSL 5: မာနထောင်လွှားခြင်းမှနှိမ့်ချင်းသို့
သင်ခန်းစာ (၅) မာနထောင်လွှားခြင်းမှနှိမ့်ချခြင်းသို့ ဇန်နဝါရီ ၂၅ – ၃၁ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဇန်နဝါရီ ၂၅ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ဒံ၊ ၄း၁-၃၃။ သုတ္တံ ၁၄း၃၁။ ၄ရာ ၂ဝး၂-၅။ ယောန ၃း၁ဝ။ ဒံ၊ ၄း၃၄-၃၇။ ဖိလိပ္ပိ ၂း၁-၁၁။ အလွတ်ကျမ်းချက် ”နိမိတ်လက္ခဏာတော်သည် အလွန်ကြီးပေ၏။ အံ့ဖွယ်သော အမှုတော်လည်း တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံပေ၏။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် သည် ထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၏။ အာဏာစက်တော်လည်း ကမ္ဘာအဆက်ဆက် တည်တော်မူ၏” (ဒံယေလ ၄း၃)။ ထောင်လွှားဝါကြွားခြင်းသည် နံပါတ်တစ်အပြစ်ဖြစ်သည်။ လူစီဖာ မှအစပြုခဲ့သည်။ လူစီဖာသည် ကောင်းကင်သားအစုအဝေးမှ ကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ”သင်သည် ကိုယ်၌တင့်တယ်ခြင်းအသရေကြောင့် ဝါကြွား သောစိတ်ရှိလျက် ဂုဏ်ထွန်းတောက်သောကြောင့်၊ သင်၏ပညာသည် ဖောက်ပြန်လျက်ရှိလေပြီ။ […]
MSS 4: မီးဖိုတွင်းမှနန်းတော်တွင်းသို့
သင်ခန်းစာ (၄) မီးဖိုတွင်းမှနန်းတော်တွင်းသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၈ – ၂၄ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၈ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ဒံ၊ ၃။ ဗျာ ၁၃း၁၁-၁၈။ ထွက် ၂ဝး၃-၆။ တရားဟော ၆း၄။ ၁ကော ၁၅း၁၂-၂၆။ ဟေဗြဲ ၁၁။ အလွတ်ကျမ်းချက် ”ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်သည် မီးလောင်လျက်ရှိ သောမီးဖိုထဲက အကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်လွှတ်နိုင်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော် ၏လက်မှလည်း ကယ်လွှတ်တော်မူလိမ့်မည်” (ဒံယေလ ၃း၁၇)။ ”ဟေဗြဲလူငယ်များသည် ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝလျက် တစ်တိုင်းပြည် လုံးသို့ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့ကိုးကွယ်သောထာဝရဘုရား သည် ဘုရားအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကို သက်သေပြကြသည်။ ထိုသို့ပြသခြင်းသည် သူတို့၌စည်းကမ်းပညတ်ကို လိုက်လျှောက်ကြောင်း သက်သေပြနေသည်။ ရုပ်ထုနှင့်ထာဝရအသက်ရှင် တော်မူသောဘုရားကို ယှဉ်တွဲပြိုင်ဆိုင်လာလျှင် ကိုယ်တော်၏အစေခံတို့သည် […]
MSS 3: နက်နဲခြင်းမှဖွင့်ဟဖော်ပြခြင်းသို့
သင်ခန်းစာ (၃) နက်နဲခြင်းမှဖွင့်ဟဖော်ပြခြင်းသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၁ – ၁၇ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၁ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ဒံ၊ ၂း၁-၁၆။ တ၊ ၁ရး၂၈။ ဒံ ၂း၁၇-၄၉။ ဆာ၊ ၁၃၈။ ယောဟန် ၁၅း၅။ တရားဟော ၃၂း၄။ ၁ပေ ၂း၄။ အလွတ်ကျမ်းချက် ”ထိုအခါ ဒံယေလသည် ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်၊ ဘုရားသခင်၏နာမတော်သည် ထာဝရ မင်္ဂလာရှိပါစေသတည်း။ အစွမ်းသတ္တိနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံတော်မူ ၏” (ဒံယေလ ၂း၂ဝ)။ ရေပြင်ပတ်လည်ဝန်းရံထားသော ”ဂရင်းလန်း” (ွမနနည ူညေိ) ၌ ရေခဲတုံးများအရွယ်အစားမျိုးစုံ စီးမျောနေသည်။ အချို့သောအချိန်များတွင် ရေခဲတုံးအသေးများသည် ရေခဲတုံးကြီးများ၏မျောပါရာစီးကြောင်း၏ဆန့်ကျင် ဖက်ဘက်သို့ ပြောင်းပြန် စီးဆင်းနေကြောင်းတွေ့ရတတ်သည်။ သမုဒ္ဒရာ၏ […]
HSS 3: THURUK ATANGA THUPUAN
ZIRLAI3January 11–17 THURUK ATANGA THUPUAN CHANGVAWN: “Daniela chuan, ‘Pathian hming chu kumkhaw tlaitluanin fakin awm rawh se, finna leh thiltihtheihnaataani si a’ tiinachhang a,” (Daniela 2:20, ESV). SABBATH CHAWHNU January 11 Chhiar Tur: Deuteronomi 32:4; Sam 138; Daniela 2:1–16; 2:17–49; Tirhkohte 17:28; Johana 15:5; 1 Petera 2:4. […]
MSS 2: ယေရုရှလင်မှဗာဗုလုန်သို့
သင်ခန်းစာ (၂) ယေရုရှလင်မှဗာဗုလုန်သို့ ဇန်နဝါရီ ၄ – ၁ဝ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဇန်နဝါရီ ၄ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ၄ရာ ၂၁း၁ဝ-၁၆။ ဒံ၊ ၁။ ဂလာတိ ၂း၁၉၊၂ဝ။ မဿဲ ၁၆း၂၄-၂၆။ ၂ကော ၄း၁၇။ ယာကုပ် ၁း၅။ အလွတ်ကျမ်းချက် ”ဘုရားသခင်သည် ထိုလုလင်လေးယောက်တို့အား အထူးထူး သောသိပ္ပံအတတ်ပညာတို့ကိုသိစေခြင်းငှာ၊ ထိုးထွင်း၍ နားလည်နိုင် သော ဉာဏ်သတ္တိကိုပေးသနားတော်မူ၏” (ဒံယေလ ၁း၁၇)။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျဆုံးနေသောလူသားများ၏အားနည်းခြင်း အကြောင်းကိုဖော်ပြရန် အားမနာတတ်ချေ။ ကမ္ဘာဦး ကျမ်း အခန်းကြီး (၃) မှစတင်၍ လူသားများ အပြစ်ပြုခဲ့၍ စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရရှိသောရလဒ် ကို ဖော်ပြထားသည်။ ထိုတစ် ချိန်တည်းမှာပင် […]
MSS 1: ဖတ်ရှုခြင်းမှနားလည်လာရခြင်းသို့
နောက်ဆုံးကာလ၏ပုရောဖက် ”ဒံယေလ” ၁၉ ရာစု ကျော်လွန်ကုန်ဆုံးသွား၍ ၂ဝ ရာစုနှစ်ရောက်ရှိလာချိန်တွင် အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတော့သည်။ သိပ္ပံပညာအားဖြင့် သော် လည်းကောင်း၊ နည်းပညာများအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတော့သည်။ သူတို့အတွက် ရွှေခေတ်ဟူ၍ပင်မှတ်ယူနိုင် သည်။ စစ်ပွဲ၊ သဘာဝ ဘေးဒဏ်၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းများ အဆုံးသတ်တော့မည်ဟု မျှော်လင့်စရာပင်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ထိုအရာ များသည် မျှော်လင့်ချက် အပိုင်းတွင် သာရှိနေသည်။ အမှန်ပင် ၂ဝ ရာစုခေတ်၌ ထိုသို့သောမျှော်လင့်ချက်မျိုးမှာ မှားယွင်း စေသည်သာမက၊ မိုက်မဲစွာတွေးခေါ်မျှော်လင့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မြင်သာ ထင်သာ ရှိနေသော အရာမှာ ယခုကျွန်ုပ်တို့ ၂၁ ရာစုသို့ရောက်ရှိနေသည့်တိုင် ပို၍ကောင်းမွန်လာသောအနာဂတ်လမ်းအတွက် တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိသေးပါ။ ကမ္ဘာကြီးသည် လှပနေဆဲ၊ တိုးတက်ရွေ့လျားနေဆဲဖြစ်သည်ဟု အမြင်ရှိကြသည်။ […]
MSS 13: ဣသရေလလူမျိုးထဲမှခေါင်းဆောင်များ
သင်ခန်းစာ (၁၃) ဣသရေလလူမျိုးထဲမှခေါင်းဆောင်များ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ – ၂၇ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ၃ရာ ၁၂း၁-၁၆။ တမန် ၁၅း၇-၁၁။ ယောဟန် ၁၁း၄၆-၅၃။ နေဟမိ ၄း၇-၂၃။ ဧဇရ ၈း၂၁-၂၃၊၃၁၊၃၂။ အလွတ်ကျမ်းချက် ]]လူအပေါင်းတို့သည် ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည် သောကြောင့် စားသောက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးတို့အားဝေမျှခြင်း၊ အလွန် ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုအံ့သောငှာသွားကြ၏}} (နေဟမိ ၈း၁၂)။ ဧဇရနှင့်နေဟမိတို့နှစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်စေခိုင်းသမျှကို ဆက်ကပ် လုပ်ဆောင်သောနမူနာယူထိုက်သည့်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင် ကိုချစ်သောစိတ်ထားသည် သစ္စာရှိငယ်သားဘ၀ကိုရရှိစေပါသည်။ ထို့အတွက် ကြောင့် သူတို့၏သစ္စာရှိခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လေ့လာရန် အကြောင်းအရာ၏အချက်အချာဖြစ်လာသည်။ ယခုအပတ်တွင် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှတွေ့ရသောနမူနာယူစရာကောင်း သောခေါင်းဆောင်များအကြောင်းကို လေ့လာသွားကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဧဇရ နှင့်နေဟမိတို့အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံစေ့စပ်သောသင်ခန်းစာမဟုတ်သော် လည်း၊ ဆွေးနွေးဖလှယ်ရန်အကြောင်းများစွာရှိနေပါသည်။ […]
MSS 12: မကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆံရခြင်း
သင်ခန်းစာ (၁၂) မကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆံရခြင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၄ – ၂၀ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ နေဟမိ ၁၃း၂၃-၂၅။ တရားဟော ၇း၃၊၄။ ၂ကော ၆း၁၄။ ဧဇရ ၉ နှင့် ၁၀။ ၁ကော ၇း၁၀-၁၇။ အလွတ်ကျမ်းချက် ]]အိုအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သို့မမျှော်ကြည့်ဝံ့။ ရှက်ကြောက်၍မျက်နှာနီပါ၏။ အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့ပြုမိ သောဒုစရိုက်တို့သည် အကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှာ အထပ်ထပ်လွှမ်းမိုး၍၊ ကြီးစွာသောအပြစ်သည် မိုးကောင်းကင်သို့မီပါ၏}} (ဧဇရ ၉း၆)။ ဣသရေလအမျိုးသားချင်းမဟုတ်သော ဇာတ်ကွဲပြားသောလူမျိုးများနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေါင်းသင်းခြင်းကို သာမန်သဘောထားသောအချိန်တွင် ဧဇရနှင့်နေဟမိတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးလုံးမှာ ထိုကိစ္စကိုအလွန်အလေးထားသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏ လူမျိုးကို ဘုရားသခင်နှင့်နီးကပ်စွာရှိစေလိုသောခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ရုပ်တုကိုးကွယ်သူနှင့် ယုံကြည်သူမဟုတ်သောသူများ၏အယူလွဲမှားမှုများ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါ်မကျရောက်ရစေရန် အမြဲသတိပေးသည်။ လွန်ခဲ့ […]
MSS 11: ဒုံရင်းပြန်၍ဖောက်ပြန်သောလူမျိုး
သင်ခန်းစာ (၁၁) ဒုံရင်းပြန်၍ဖောက်ပြန်သောလူမျိုး ဒီဇင်ဘာ ၇ – ၁၃ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၇ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ နေဟမိ ၁၃း၁-၉။ တရားဟော ၂၃း၃-၆။ နေဟမိ ၁၃း၁၀-၁၄။ တောလည် ၁၈း၂၁-၂၄။ နေဟမိ ၁၃း၁၅-၂၂။ ယောဟန် ၅း၅-၁၆။ အလွတ်ကျမ်းချက် ]]လေဝိသားတို့သည်လည်း ဥပုသ်နေ့ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ၊ စင်ကြယ်သောကိုယ်နှင့်လာ၍ တံခါးတို့ကိုစောင့်ရမည်အကြောင်း ငါမှာထား၏။ အိုအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကို အောက်မေ့တော်မူပါ။ ကရုဏာတော်များပြားသည်အတိုင်း အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါ}} (နေဟမိ ၁၃း၂၂)။ အခန်းကြီး (၁၂) နှင့် (၁၃) စပ်ကြားတွင် နေဟမိသည် ဗာဗုလုန်သို့ပြန်လာသည့်အကြောင်း မှတ်တမ်းပြုထားသည်။ မည်မျှကြာကြာ နေခဲ့သည်ကိုဖြင့် မသိရသော်လည်း၊ သူအမှန်တကယ်ပြန်လာခဲ့သည်။ (ဘီစီ ၄၃၀-၄၂၅) ဝန်းကျင်ခန့်ဖြစ်မည်။ […]
MSS 10: ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း
သင်ခန်းစာ (၁၀) ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ ၃၀ – ဒီဇင်ဘာ ၆ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း နိုဝင်ဘာ ၃၀ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ နေဟမိ ၁၂း၂၇-၄၇။ ၅ရာ ၂၅း၆-၈။ ၁ယော ၁း၇-၉။ ယော ၁း၂၉၊၃၆။ ၁ကော ၅း၇။ ဟေဗြဲ ၉း၁-၁၁။ အလွတ်ကျမ်းချက် ]]ထာ၀ရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၏။ ဣသရေလအမျိုး ၌ပြတော်မူသောကရုဏာတော်အစဉ်အမြဲတည်ပါသည်ဟူ၍ ဂုဏ်တော် ကိုချီးမွမ်းလျက်၊ ကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံလျက် အသံပြိုင်၍အလှည့်လှည့် သီချင်းဆိုကြ၏}} (ဧဧရ ၃း၁၁)။ ယခုအပတ်၌ ဟေဗြဲလူမျိုးများ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းထောမနာပြု ပုံ၊ ဝတ်ပြုခြင်းပုံစံကိုလေ့လာကြရမည်။ ဘီစီ ၅၁၅ တွင် ဗိမာန်တော်အသစ် ဆက်ကပ်ပွဲကို သူတို့ကျင်းပကြသည်။ (ဧဇရ ၆း၁၅-၁၈)။ နောက်တွင် နှစ်ပေါင်း (၆၀) […]
MSS 9: စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်စာရင်းများ
သင်ခန်းစာ (၉) စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်စာရင်းများ နိုဝင်ဘာ ၂၃ – ၂၉ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း နိုဝင်ဘာ ၂၃ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ဧဇရ ၁း၉-၁၁။ ဒံ ၁း၁၊၂။ ဒံ ၅။ တရားဟော ၃ဝး၁-၆။ ဧဇရ ၈း၁-၂၃။ နေဟမိ ၁၁း၁၊၂။ ၁၂း၁-၂၆။ အလွတ်ကျမ်းချက် “ညီအစ်ကိုမှူးမတ်တို့၌မှီဝဲလျက်၊ ဘုရားသခင်၏ကျွန်မောရှေ အားဖြင့်ထားတော်မူသော ဘုရားသခင်၏တရားတော်အတိုင်းကျင့်ပါ မည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ငါတို့အရှင်ထာ၀ရဘုရား၏ပညတ်တော်များ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါမည်” (နေဟမိ ၁ဝး၂၉)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ သားစဉ်မြေးဆက်ဆင်းသက်သည့် နာမည်စာရင်းကို ကျော်ဖြတ်သွားတတ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်မှ ထိုသို့ နှုတ်ကပတ်တော်အတွင်းထည့်သွင်းထားခြင်းမှာ အကြောင်းရင်းရှိ၏။ သမ္မာ ကျမ်းစာမှဖော်ပြသော ထာ၀ရဘုရားသည် အသေးစိတ်တိကျသောဘုရား ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သည့်ကိစ္စအထိ မှတ်သားသတိပြုသောဘုရားဖြစ်သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်သောအခါမျှ မေ့လျော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကို […]
MSS 8: ထာ၀ရဘုရားနှင့်ပဋိညာဉ်တော်
သင်ခန်းစာ (၈) ထာ၀ရဘုရားနှင့်ပဋိညာဉ်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၆ – ၂၂ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း နိုဝင်ဘာ ၁၆ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ နေဟမိ ၁ဝး၁-၂၉။ ကမ္ဘာဦး ၄း၈-၁၉။ ဟေဗြဲ ၁၃း၂၀။ ယောရှု ၂၄။ နေဟမိ ၁ဝး၃၀-၃၉။ ဟေဗြဲ ၈း၁-၇။ အလွတ်ကျမ်းချက်“ထိုအကြောင်းအရာများကို ငါတို့သည်ဆင်ခြင်ပြီးမှ သစ္စာပြု ၍၊ စာချုပ်ကိုလည်းရေးထားလျက်၊ ငါတို့အကြီးအကဲယဇ်ပုရောဟိတ် လေဝိသားတို့သည် တံဆိပ်ခတ်ကြ၏။. . . ငါတို့ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ကို ငါတို့သည် စွန့်ပစ်၍မထားရကြ” (နေဟမိ ၉း၃၈။ ၁ဝး၃၉)။ ပဋိညာဉ်ဟုဆိုရာ၌ သမ္မာကျမ်းမှမည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသနည်း။ အလွယ်ကူဆုံးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင်၊ လူနှင့်ဘုရားတရားဝင်တည်ထောင်သော ရင်းနှီးဆက်နွှယ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ပြန်ရပါမည်။ ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသော စကားမှာ “သင်တို့သည် ငါပိုင်ထိုက်သောအမျိုး၊ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာ၀ရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။” ထိုထက်ပို၍ ရှေးခေတ်မှလူများရေးဖွဲ့ကြသော […]
MSS 7: ခွင့်လွှတ်တတ်သောအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်
သင်ခန်းစာ (၇)ခွင့်လွှတ်တတ်သောအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင် နိုဝင်ဘာ ၉ – ၁၅ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း နိုဝင်ဘာ ၉ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ နေဟမိ ၉း၁-၃။ ဒံ ၉း၄-၁၉။ နေဟမိ ၉း၄- ၈။ ကောလောသဲ ၁း၁၆၊၁၇။ နေဟမိ ၉း၉-၃၈။ ရောမ ၅း၆-၈။ အလွတ်ကျမ်းချက်“မိမိအပြစ်ကိုဝှက်ထားသောသူသည် ချမ်းသာမရ။ မိမိအပြစ် ကိုဖော်ပြဝန်ချ၍ စွန့်ပစ်သောသူမူကား၊ ကရုဏာတော်ကိုခံရလိမ့်မည်” (သုတ္တံ ၂၈း၁၃)။ တဲထိုးပွဲတော် (sukkot) ပြီးဆုံးသွားသည်နှင့် ခေါင်းဆောင်ကြီး များသည် လူတို့ကိုတစ်ဖန်ပြန်၍စုရုံးစေပြန်သည်။ ပွဲတော်ကျင်းပပြီးစီးစဖြစ် ၍ ယခုတွင်မပြီးဆုံးသေးသောဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း၊ နောင်တရခြင်းအမှုကို ဆက်လက်၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သောအချိန်၌ ခေါင်းဆောင်ကြီးများသည် လူထုကြီးကိုငိုကြွေး မြည်တမ်းခြင်းမပြုကြရန်၊ ဝန်ချခြင်းနှင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းသည် အရေးမကြီး သေးသောအချိန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ယခုတွင်မူ ပွဲတော်ကျင်းပခြင်းပြီးဆုံး ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဝန်ချတောင်းပန်ရမည့်အချိန်ကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်အတိုင်းသုံးသပ်ကြည့်သောအခါ၊ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်း […]